Noon Update: Golmaal Again 95% ayuu marayaa duhurkaan xiliga Hindiya waa la isku soobaxay | Filimside.net
Home » Box Office » Noon Update: Golmaal Again 95% ayuu marayaa duhurkaan xiliga Hindiya waa la isku soobaxay
Noon Update: Golmaal Again 95% ayuu marayaa duhurkaan xiliga Hindiya waa la isku soobaxay
Feestada Diwali maalinta ugu weyn waxaa si waali ah kaga faa’iideesanayo filimka magaca Blockbuster-ka ah xambaarsan Golmaal Again oo si waali ah u gadmaayo.
Golmaal Again subaxdii hore saakay wuxuu ku furmay 70% ayadoo la saaray 2800-tiyaatar balse haatan wuxuu marayaa xiliga duhurka Hindiya 95% sidoo kalena tiyaataradiisa waxaa la gaarsiiyay 3400 tiyaatar.
Madaama filimka Secret Superstar magaalooyiin kooban laga daawanayo dhamaan tiyaatarada badankooda waxaa dib loogu soo celinayaa Golmaal Again oo haatan xiligi duhurka Hindiya tikityadiisa oo dhan la iibsaday.
Subaxdii hore dooda waxay ahayd Golmaal Again 20 Crore ilaa 25 Crore ayuu keeni balse xiligaan duhurka Hindiya sheekada dhinac kale ayay u rogantay waxaana haatan lagu sharad tamayaa in Golmaal Again si waali ah 30 Crore maalinta kowaad ku keeni karo.
Feestada Diwali iyo Golmaal Again oo mada daalo dhameestiran leh ayaa mideeyay shacab weynaha Hindiya ku nool Koonfur, Waqooyi, Bari iyo Galbeed dhamaan waxay ka siman yihiin inay usoo wada baxeen daawashada Golmaal Again.
Golmaal Again oo gil gilaayo tiyaatarada Hindiya waxaan sugnaa waa gelinka dambe maanta halka filimkaan uu sii hiigsan doono madaama heerkii ugu sareesay 95% uu hada garaacayo meel walbo!
Waxaa Aqrisay 1,081
4 Responses to Noon Update: Golmaal Again 95% ayuu marayaa duhurkaan xiliga Hindiya waa la isku soobaxay
Filimside waxaan idingaga mahad celinayaa Aqbaaraadka aad noo soo kudbisan mida labaad ajay Waa actor dhameestiran taxanaha Goolmaal waa filin heer saro oo aan wado naqaano Wadankeenana laga jecelyahay marka waxaa Asxaabta ku xiran inee Shirka Fanproj Codsi kaarsiyaan Si filimkaan ugu raaxeesano Sidoo kalena turjumita codadka cudsanaa Sida
1-Ajay-Fuaad 2-Arshad Warsi-Yackoo 3-Shreyas-Abdifitah 4-Kunal khemu-Ciraaq 5-Tusshar-Ciraaq 6-See rabtaa jeekeey 7-Amadi-Ajakis 8-Sanjay mishra-Dooli
Asxaabta Waxaa rajeenaa inaa codsigaas Fanproj u gudbisan si filinka xiiso noogo yeesho. Waa mahadsadiin
Filimside wax ka dhaha ra,yigaan! jawaab wacan thanks
Dadkii qof walbo ku haboonaa waad u dooratay balse ilama ahan in dhamaantooda hal shirkad isku keeni karto madaama raggii caanka ahaa kala tageen shirkado kala duwan ayay hada u shaqeeyaan qaar Fanproj ayay joogaan qaarna Astaan TV marka labo meel ayay kala galeen dadka la iskuma keeni karo.
sxb waa run yacko iyo jeeky midna majoogo fanproj balse inta kle way joogaan ee booqo face book pageka fanproj iyaga kuusoo jawaabaya
sxpyaal Fanproj Waa shirkad weyn wey isku keeni kartaa mida kale Yackoo iyo jeekeey hada wey joogaan Fanproj oo filim saaki xayeeysiinta fanproj soo dhigtay ayee ku jireen xitaa ajakis woo joogaa marka Hala isku dayo